Igwe carrots: nkọwa, foto, nkọwa, teknụzụ ugbo - Karọt iche - 2019
Carrots bụ ọkacha mmasị, ewu ewu, na nri ọma. Taa, e nwere ọtụtụ ụdị dị iche iche. Isiokwu ahụ ga-ekwu banyere ụdị dị iche iche carrots "Tushon", anyị ga-enye nkọwa ya, ndụmọdụ maka ịgha mkpụrụ na nlekọta, foto nke ihe na-eto na nkwenye niile.
Omume nke di iche
Ike na adịghị ike
Nhọrọ nke ebe na oge maka ịkọ ihe
Kedu mgbe ị ga-amalite ọdịda?
Nkwadebe nke akuku ihe
Nkọwa na foto
"Akwụkwọ" - ọ bụ mkpụrụ klọb mbụ nke carrots. Na-ezo aka na Amsterdam cultivar. Ụdị nke "Tushon" bụ nke na-ahụ anya, nke dị mma, anya nke a na-apụghị ịhụ anya. Ogologo mgbọrọgwụ bụ 15-20 cm. O nwere anụ dị nro ma dị ụtọ. A na-ezubere maka ịkụ ihe n'ubi. Na-eguzogide mgbanwe mgbanwe okpomọkụ. Maka ripening na-ewe ihe dị ka ọnwa atọ mgbe ịghasịrị. Na-emeso akara ule zuru ụwa ọnụ ma jiri ya mee ihe na kuki, nke kwesịrị ekwesị maka iji ya mee ihe n'ụzọ dị irè, akwadoro maka nri ụmụaka.
Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị gụọ banyere ụdị carrots ndị dị ka: "Nantes", "Samson", "Shantane 2461", odo odo na oji carrots.
Mkpụrụ osisi na-arụ ọrụ na-acha.
Ubu oke 4-5 n'arọ / sq. m
Ịmalite oge 80-90.
Ihe na-esi sugar bụ 6-8%.
Ihe ọdịnaya nke carotene 11,5-11,9%.
Ndị ọrụ ubi na-ahụ n'anya "Tushon" maka àgwà ndị dị otú ahụ:
mkpụrụ dị elu;
iguzogide oria na ichikota nkpuru;
obere oge ripening;
Ezi ọdịdị na uto uto.
A na-achọpụta ihe ndị a na-akpọ minuses ọ gwụla ma ọ bụ ndụ dị mkpirikpi.
Ya mere, otu esi eto eto akwukwo nri a di ebube?
Iji mepụta akwa n'okpuru "Tushon", họrọ ebe na-emeghe na ebe anwụ. Obere na-eme ka oge na-eto eto, n'ihi ya, ọ dị njọ ka Tushon na-eto n'okpuru osisi ma ọ bụ megide mgbidi ụlọ.
Ị ma? Maka inwe ọganihu na-eto eto nke carrots kwesịrị iburu n'uche na ọdịbendị nke na-eto n'ebe a n'oge ikpeazụ. A na-ewere onye na-ebute ụzọ dị ka poteto, eyịm, cucumbers.
Ala kwesịrị ịdị ọcha na nke ọma drained. Nke ka nke kachasị, ihe ọkụkụ ahụ ga-eche na ọ ga-adị n 'ugbua na loams. Ọ bụrụ na ala gị dị arọ ma ụrọ, mgbe ahụ, ọ ga-adị mma igbakwunye ájá na ájá n'ebe ahụ iji mee ka ọ dịkwuo ala.
E nwere ike ịkọ mkpụrụ okwu ịgha mkpụrụ, na-echebara oge ịkọ ụra echiche.
Oge kacha mma maka ịgha mkpụrụ bụ March na April.
Ọ dị mkpa! Carrots nwere ike ịnagide frosts nke elu ruo ogo 3, ya mere, ọ bụrụ na a na-atụ anya mmiri na-ekpo ọkụ, mgbe ahụ, a ga-akụ ya na windo February.
Ugbu a, ka anyị kwuo okwu banyere mkpụrụ n'onwe ya.
Tupu ịgha mkpụrụ, ị ga-akwadebe mkpụrụ n'onwe ha. Ọ kachasị mma ịkwanye ha maka otu ụbọchị n'ime mmiri ma ọ bụ ihe ọ bụla ọganihu nke uto. N'ihi na ọbụna nkesa mkpụrụ n'ime akwa ahụ, jikọta ha na ájá na nha 2: 1.
Ị ma? E nwere akụkọ akụkọ na n'oge Agha Ụwa nke Abụọ, Britain malitere ịmepụta radar nke abalị, ya mere, ụgbọelu ha nwere ike imebi ndị agha Germany na-atụ bọmbụ n'abalị. Iji mee ka ha "mara ihe" na nzuzo dị ka o kwere mee, British Air Force na-agbasa ozi na ndị ọkwọ ụgbọ ala ha nile na-eso nri nri karọt pụrụ iche nke na-enye ha ohere ịhụ ka mma n'abalị.
Nhọrọ ọzọ bụ iji dochie osisi na akwụkwọ mposi. Starch dị mma dị ka nrapado. Sook osisi ndị a agaghị arụ ọrụ, n'ihi ya, mgbe ha ghachara mkpụrụ, ha ga-abụ ọgaranya na mmiri.
Mkpụrụ kwesịrị akụ na ahịrị, na omimi nke 2-3 cm Gbalịa ịnọgide na-anya dị n'etiti mkpụrụ nke 2 cm. N'ụzọ dị otú a, ị nwere ike izere na-agba agba na okéening ubi.
Ozugbo ịgha mkpụrụ, jide n'aka na ị ga-agba mmiri ahụ.
Iji hụ na ọnọdụ kachasị mma maka ibu ma mee ka germination dị ngwa, ọ bara uru ịkwa akwa ahụ. N'ịbụ ndị jupụtara na carrots na hay, ahịhịa, peat, compost, ị ga-azọpụta ihe ọkụkụ site na ihu igwe, ị ga-enwe ike ịṅụ mmiri n'oge na-adịghị. N'ọdịnihu, ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ ga-abụ ihe fatịlaịza ọzọ.
Ndị bu ụzọ maka carrots bụ - osisi nke ezinụlọ solanaceous (tomato, poteto), ugu (cucumbers, zukini), mkpo (agwa, agwa). Ejila ihe ndị a na-eme site na kụrụ ihe ndị nwere ọrịa na pests dị iche iche, ndị a gụnyere: dil, pasili, parsnip na cumin.
Nlekọta bụ ịgbara mmiri, nsị, ịtọpụ.
N'ezie, usoro kachasị mkpa bụ ịgbara mmiri. Ọtụtụ, ma ọ bụghị nnọọ ugboro ugboro, atọ ga-enyere aka ibu nnukwu carrots.
Ọ dị mkpa! Mmiri nke elu na-eme ka mmụba na ntutu na-eme ka a ghara ịkụ mkpụrụ.
Tupu owuwe ihe ubi, mgbe e guzobere carrots, i nwere ike ịkwụsị ịgbara mmiri.
Ọrụ ọzọ dị mkpa dị mkpa. Osisi dị oké ọnụ na-egbochi mmepe nke ihe ọkụkụ, ma carrots gbanwee ma sie ike. Ya mere, ọ dị mkpa iji dọpụta osisi ndị ọzọ. Mee ya na nkebi abuo. Nke mbụ, a na-agbanwe ihe dị n'etiti osisi na 12 cm (maka nnukwu ụdị - ruo 15 cm). Mgbe ahụ, ịchọrọ ime ka anya a ruo 22-25 cm.
Usoro ọzọ - ịtọpụ. Ịkwụsị nwere ike ịdị n'otu oge na weeding na thinning, na mgbe atọ. Na-enye ohere ikuku na mgbọrọgwụ, ị nwere ike nweta mgbọrọgwụ dị mma ma sie ike.
Nhicha na-eme ka carrots ripen. Mgbe mgbọrọgwụ ruru ntozu okè, a ga-achịkọta ihe ọṅụṅụ, ha ga - adị buru ibu - jiri nlezianya kpoo ha, na - agbalị ka ha ghara imebi ma ọ bụ belata. Hichaa carrots anakọtara site na ala, kpochapu ma tinye ya n'osisi.
"Adọn" enweghị ike ịchekwa ruo ogologo oge. Ya mere, gbalịa ozugbo tinye carots ọhụrụ na ikpe ahụ.
Gini mere geraniums? Gini kpatara osisi ahu adighi na ntoju na otu esi enyere ya aka?
Coleus: Home Care Features
Kedu ka esi azụ "Solikoks" maka rabbits
Copyright 2019 \_ Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa \_ Onye na-ede ihe dị iche iche nke onye na-ede akwụkwọ